गहुँत, गोबर र यज्ञ, कोरोना संक्रमण रोक्न पनि सक्छ !? – Nepal Japan
नेपाली समय : 03:27:57
जापानी समय : 06:42:57
गहुँत, गोबर र यज्ञ, कोरोना संक्रमण रोक्न पनि सक्छ !?
18 March, 2020 15:02 | जल/वातावरण/स्वास्थ्य | comments | 78150 Views
हामी प्रायःजसोले देख्दै र गर्दैआएको काम के हो भने कुनै पनि शुभकार्य गर्दा गहुँत (गोमूत्र) छर्कने र गोबर माटोले पोत्ने गरिन्छ । यसको कारण वातावरण शुद्धता नै हो, गोमूत्र र गोबरमा वातावरण शुद्ध पार्ने अर्थात् भाइरसहरु मार्ने शक्ति हुन्छ ।
आधुनिक चिकित्साविज्ञानको पिता मानिने आयुर्वेदमा गोमूत्र (गहुँत)लाई अमृतसमान मानिएको छ । हजारौं वर्ष पहिले लेखिएको यो कुरालाई आधुनिक वैज्ञानिक युगमा पनि स्वीकार गरिएको छ । गोमूत्रलाई जैवीक औषधिको विकल्पका रुपमा राखिएको छ ।
गहुँतमा ‘कक्र्युमिन’ नामक तत्व पाइन्छ जुन ‘एण्टी क्यान्सर ड्रग’ हो । अमेरिकाले गाईको गहुँतमा शोध गरी गोमूत्रबाट बन्ने पाँचवटा औषधिको ‘पेटेन्ट राइट’ लिएको छ । भारतले पनि गाईको गोबरमा अनुसन्धान गरी ४८ वटा औषधिको ‘पेटेन्ट राइट’ लिएको छ ।
यति मात्र हैन रुसी वैज्ञानिक शिरोबीचले मानिसमा हुने रेडियोधर्मी कणको प्रभाव नष्ट गर्ने क्षमता गाईको दूध, दही, घ्यू, गहुँत र गोबरमा हुने अनुसन्धानबाट पत्ता लगाए । सन् २०१२ मा अमेरिकन हर्ट एशोसिएशनले स्थानीय गाईको दही सेवन गर्नाले उच्च रक्तचापका रोगीमा ३१ प्रतिशतले कमी आएको तथ्य सार्वजनिक गर्यो ।
आज विश्वभर कोरोना संक्रमण फैलिइरहेको छ र नेपाल पनि उच्च जोखिममा छ । आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले कोरोनाको औषधि पत्ता लगाउन नसकिरहेका बेला वैदिक सनातनी धर्म, संस्कृति र संस्कार भएका नेपाल तथा भारत जस्ता मुलुकमा परम्परागत मान्यतामा आधारित सुरक्षा बिधिका रुपमा गौमूत्रको प्रयोग हुन थालेको छ ।
हुन पनि गाईको दूधदेखि मलमुत्र र शरीरका अन्य अंगहरु समेत मानव र प्रकृति संरक्षणका लागि आवश्यक तत्व र शक्ति हुनाले नै प्राचीनकालदेखि यसलाई अति महत्व दिएको हो । हावामा हुने किटाणु नास गर्नेदेखि लिएर पानी स्वच्छ राख्ने अनि घर परिसरलाई घातक जीवाणुरहित बनाउनकै लागि रुद्री, चण्डी पाठसंगै गाईको गहुँत छर्कने गरिन्छ ।
त्यस्तै हाम्रो धार्मिक मान्यतामा हवन (यज्ञ)को अति महत्व छ र त्यस्ता यज्ञ गर्दा गाईको घ्यू प्रयोग गरिन्छ । यसरी हवन गर्दा प्रोपिलिन अक्साइड, इथिलिन अक्साइड, फरमलडिहाइड ग्यास निस्किन्छ । प्रोपिलिन अक्साइडले वर्षा गर्न सहयोग पुर्याउँछ भने इथिलिन अक्साइड र फरमलडीहाइड ग्यासले पर्यावरणमा नकारात्मक असर पुर्याउने जीवाणुलाई मारी शुद्धीकरण गर्दछ ।
वैदिक शास्त्रका बारेमा थोरै मात्र जानकारी राख्नेहरुले पनि बुझेको कुरा के हो भने गोमूत्र औषधि हो । हवन (यज्ञ) वातावरण शुद्धपार्ने सबभन्दा प्रभावकारी र वैज्ञानिक विधि हो । गाईको घ्यूमा मुछिएको चरु आगोमा होम्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने धुवाँ मानव र प्रकृतिलाई संरक्षण गर्ने तत्व हो ।
अहिले कोरोना संक्रमणको त्रासमा रहेको भारतमा गाईको गोबर र गहुँत धमाधम बिक्री हुन थालेको छ । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार पश्चिम बंगाल आसपास क्षेत्रमा गोबर र गहुँत ८०० रूपैयाँ किलो/लिटरमा बेचिएको छ ।
हुन त गहुँत र गोबरले कोरोना नास गर्छ वा सर्न दिंदैन भन्ने प्रमाण आधुनिक विज्ञानले नगरे पनि क्यान्सर समेत निको पार्ने शक्ति हुने गहुँतको सेवनले भाइरस नियन्त्रण गर्दैन भन्ने आधार छैन । त्यसैले त भारतको राजधानी दिल्लीमै तीन दिनअघि हिन्दू अभियन्ताहरूले गहुँतले कोरोना संक्रमणबाट बचाउने भन्दै गहुँत पिउने कार्यक्रम गरेका थिए ।
आजभोलि आधुनिक आवास निर्माणसंगै विहान विहान गोबर माटोले घर लिप्ने चलन हराउँदै गए पनि पूजापाठ तथा त्यस्तै शुभ कार्यहरुमा गोमूज्ञ छर्कने र गोबरले लिप्ने कार्य आज पनि गर्दैआएका छौं । किन गोमुत्र र गोबर नै प्रयोग गरियो, किन भैंसीको मल-मुत्र प्रयोग भएन ? यो नै हामी सबैले सोच्नुपर्ने विषय हो । आयुर्वेदमा गोमूत्रको औषधिय गुणबारे व्यापक चर्चा गरिए जस्तै पश्चिमा वैज्ञानिकहरुले पनि यसको चर्चा त्यसै गरी गरेका छन् । बेलायतका एक चिकित्सक डा. सिमर्सले आफ्नो अनुसन्धानपछि गोमूत्रले रगतमा फैलिएको भाइरस तथा किटाणु मार्ने दावी गरेका छन् । यसका अतिरिक्त अन्य कैयो रोगका लागि यो बरदान सावित भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
गहुँत, गोबरको प्रयोगले कोरोना संक्रमण हुँदैन भन्ने भन्दा पनि यसको प्रयोगले वातावरण किटाणुरहित हुन्छन् भन्ने हो । आजभोलि गोमुत्र सेवन गर्ने फेसन पनि त्यसै चलेको हैन । प्रयोगशालामा कोरोनाबिरुद्ध लड्ने शक्ति गोमूत्रमा छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउने चासो कसैले नदिएका भए पनि यसको प्रयोगले फाइदा नै हुने हुँदा कतै कोरोनालाई पनि नियन्त्रण पो गर्छ कि ?